Can we expect international help? If so, from where?
The Tatmadaw(n) – The Dusk of democracy in Myanmar: A legal analysis on possible judicial intervention It was Monday morning rush foranewly democratically elected government that ended in darkness of their abduction by the Tatmadaw military. This act of coup d’état resulted in not only stripping the governmental officials' freedoms away but the whole nation`s essential elements of democracy. This event followed in arrests of students favouring democracy, forceful recruitment by the military, abolition of all non-military news channels; this list goes on but suffices to say that young prosperous democracy in Myanmar is getting back to be an old vicious dictatorship. Because of the Rohingya crisis, Myanmar was certainly in the eye of the international community for years now, with the ICJ and ICC pending cases, the UN also established an Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM). What can be done to stop the atrocities in Myanmar and how can the international community respond. Are permanent international courts able to intervene, and how? The International Court of Justice isapermanent court withamandate “to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies”. Gambia brought the ICJ case against Myanmar in 2019, when they argued that Myanmar had not fulfilled its obligations asamember country of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide, which places an obligation on member states to prevent and punish genocide. This case isastate-to-state legal dispute between two UN member states governed by legal provisions in the UN Charter, the ICJ Statute, and the Genocide Convention. Thus in this situation the ICJ cannot intervene if other states would not step in and raiseaconcern that the military is breaching some of the internationally recognized documents. The cases before the ICJ are not criminal cases against individually alleged perpetrators and the current case of Gambia v. Myanmar does not involve the International Criminal Court (ICC), which isaseparate judicial body. The International Criminal Court that has been established to bring justice to the victims of the gravest atrocities, unfortunately, in this case has very limited options. Firstly, the Republic of the Union of Myanmar is notaparty to the Rome Statute. This means that the International Criminal Court has no jurisdiction over the crimes committed in the territory of Myanmar or over their nationals. This might raise confusion with the on-going investigation at the ICC in Bangladesh/Myanmar Situation. In that case, the Prosecutor was authorised to investigate the crimes committed (at least in part) on the territory of Bangladesh,aState Party to the Rome Statute, or on the territory of any other State Party for the crimes - including but not limited to - crimes against humanity, such as deportation and persecution, allegedly committed against the Rohingya population. Thus in this case the Prosecutor does not have the authority to broaden the investigation on the territory of Myanmar for the crimes that are being committed by the Tatmadaw military at the moment. Neither, does the Prosecutor have the authority to openanew, separate investigation proprio motu (on her own initiative) for the crimes being committed by the Tatmadaw military on the territory of Myanmar. Secondly, the subject expected to respond is the UN Security Council. With their power under Chapter VII of the UN Charter and under the Article 13(b) of the Rome Statute they are expected to referrerasituation in Myanmar to the ICC. Now, this would give the authority and obligation to the Prosecutor to investigate into the crimes under the territory of Myanmar, and finally for the Court to eventually summon to appear those who are most responsible for the crimes. Will this happen? This remains to be seen, but it is remotely possible with great alliances of Myanmar military sitting in the Security Council, with one powerful veto in their pockets. Lastly and highly unlikely, by submittingadeclaration pursuant to the Article 12(3) of the Rome Statute the State refers itself to the ICC and accepts its jurisdiction on an ad hoc basis. is would mean that the State of Myanmar would have to initiate an investigation to the ICC itself, by the government`s own will. Maybe in the future, don’t we all expect this end? Thus the ICC is of less/no help at this point. Now we must turn to the IIMM and their mandate. The Mechanism is established to collect and analyse evidence for future national, regional, or international prosecutions. Their work aimed to examine allegations of violations committed anywhere in Myanmar since 2011, thus covering current affairs in the whole State. The IIMM has reacted to the acts of military saying that they call for peaceful political dialog and their work continues to collect the evidence of current breaches of international law for possible future trials at any level (given national, regional, international courts). According to scholars the international justice is the art of possible, let`s believe that it will exhibit its nest form for Myanmar. In suchaway, we must not lose hope to see justice for Myanmar done, as it was greatly demonstrated in the Balkans, Rwanda, Cambodia, DRC(...).
Biography of Daw Aung San Suu Kyi
Source: www.time.com The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear.	- Daw Aung San Suu Kyi Daw Aung San Suu Kyi isaperson whom most Burmese people addressed as ‘Mother Suu.’ People seldom wondered the reason behind Burmese people’s seemingly blind trust to follow her leadership wholeheartedly. Born on June 19, 1945, in Yangon, Myanmar (Rangoon, Burma). She is the daughter of General Aung San, the national hero of Burmese independence, and Daw Khin Kyi,aprominent Burmese diplomat. Her first sacrifice asadaughter ofanational hero was on July 19, 1947, the day when General Aung San was assassinated. She was two years and one month old. Suu attended schools in Myanmar until 1960 when her mother was appointed as an ambassador to India. On March 2, 1962, the history of Myanmar had turned black byacoup d’état led by U Ne Win. In 1964, Aung San Suu Kyi attended Oxford University where she met her husband, Michael Aris. In 1972, Michael and Suu happily married and had two sons. During those years, under U Ne Win, lives had been difficult not only for Burmese living in an isolated country, Myanmar but also for Burmese living in foreign countries. However, there wasatwist of fate in 1988. Suu returned to Myanmar to nurse her dying mother, leaving her husband and sons behind. She witnessed the mass slaughter of student protestors against the reign of U Ne Win and became an activist to fight nonviolently for democracy using the phrase ‘Freedom from Fear.’ The people supported Suu’s NLD party which threatened the military. On July 20, 1989, the military government placed Suu under house arrest in Yangon and held her incommunicado. The members of the NLD party and 88 generation students were prisoned. Seeing her members being arrested, Suu went onahunger strike for 11 days until she received confirmation that her people will be treated well in prison. For more than2years, Suu’s had lost touch with her family completely. In 1991, Suu was awarded the Nobel Peace Prize for her safety and sacrifices. On July 10, 1995, after5years of house arrest, Suu was free.. In 1999, Michael died. Before his death, he tried to search for ways to visit Suu in Myanmar. The brutal Burmese military government not only denied his request but also cut off Suu’s telephones. Understanding Suu’s love for her country and the consequences of Suu’s visiting him, Michael could not request Suu to come home to England. Although Burmese citizens understand Suu’s situation, they did not want Suu to leave knowing that it will be challenging for her to come back. She had becomeasymbolism for democracy. Thus, she chose not to visit England and nurse her husband. She again fought for democracy, resulting in her house arrest from May 31, 2003, to November 13, 2010. However, the military has designed several laws in the constitution to prevent Suu from participating in the elections scheduled for 2010. One of the rules prohibited individuals who were (or had been) married toaforeign national from running for office. NLD refused to re-register under those new laws and was disbanded to support Aung San Suu Kyi. Thus, the government parties won the majority of legislative seats amid the widespread allegations of voter fraud. In 2015, NLD won the country’s first openly contested parliamentary election. However, Suu was not able to stand for the presidency so she was named state counselor whose duties were similar to that of the prime minister. In her new role, Suu focused on finding peace with the country’s many ethnic armed organizations. However, Suu and her administration team soon faced widespread international condemnation over the treatment of Rohingya people in Rakhine state. The Rohingyas are an Indo-Aryan people that reside in the Western Rakhine state close to the borders of Bangladesh. However, most Rohingyas do not read, write, or speak Burmese. During World War II, the Rohingya were allied with the British while the Burmese were allied with the Japanese. Thus, Rohingya are seen as remnants of the British colonial past. Hence, they are ineligible for citizenship or full rights. On August 25, 2017, the Rohingya paramilitary groups launched deadly attacks on more than 30 police posts. Hence, the refugee crisis began. However, Aung Suu Kyi did not have constitutional control over the military’s actions which was performed under the commander in chief, General Min Aung Hlaing. Nevertheless, she had to face pressure from the international community urging her to act over the issue. Aung San Suu Kyi can only say it isacomplicated matter due to the military aspect of the situation. The genocide was indeedaviolation of human rights, but the military groups from both sides were at fault for the innocent victims. On November 8, 2020, the NLD wonamajority of seats in the legislative chambers during the parliamentary elections. The military and its Union Solidarity and Development Party (USDP) denounced the results to be fraudulent and appealed to the electoral commission that dismissed their claims. February 1, 2021, was the day that the newly elected parliament was due to hold its first session. However, the military ledacoup d’état and detained Aung San Suu Kyi as well as other NLD leaders. State Counsellor, Aung San Suu Kyi, is now being charged with breaching import and export laws due to the possession of unlawful communication devices. In her whole life, since two years old, our leader Aung San Suu Kyi had sacrificed for Myanmar. She lost her father asadaughter, but learned about his passion and love for our country through her family as well as the citizens. She lost her husband asawife by not being able to see him in his dying moments, but it strengthened her fight for democracy. She also sacrificed her right to be free by being put under house arrest by the military for 15 years. Lastly, she lost her time asamom by leaving her two sons abroad. Most of her life decisions have been restricted because of her passion for our country’s democracy and the blood of General Aung San in her veins. She chose Myanmar even when she was being devoid of her rights. So, we, Burmese people, love her and need her as our symbolism for democracy. For her, we will not fear to fight until we reach our goal.
Love Your Father, not The Military Officer
This isaplea to the children of military upbringing, ex-military upbringing, the children who grew up with privilege that shrouded you from seeing your own privilege - the constant gifts that arrive at your house from officers wanting to gain favor with your family member clad in army green, the grand house with guards at the compound entrance, and the grand staircase you loved running up and down asachild. I know you. I am you. You love your father/mother/grandfather/(insert other family member you adore withamultitude of stars on his uniform you love to polish). How can you not? They’ve done nothing but right by you, they’ve given you affection, abundant food (your favorite snacks, those imported American snacks, those fruits from other states that you beg your nanny to cut and peel for you), an education (those tutors that come to your house everyday, polishing your school homework, your skills). You trust them. Maybe, you, growing up, did not know that the same father who lifts you up is alsoaperson that keeps others downtrodden. Maybe, you are finding it hard to come to terms with it but know that the first step forward is to acknowledge the privilege you have. Only through acknowledging can we take the next step forward: using our privilege to empower those who did not and still do not have our luxury, to ensure that the circumstances surrounding the extreme inequality in our life opportunities and others’ do not continue to exist. You can make up for your privilege and you will. You are notabad person; we do not choose our families. But we do choose where we stand, whether on the right side of history or not. You love your father; you do not love the military officer. Inherently you areaperson who is lucky enough to be born into privilege, you did not ask for this, this conflicting narrative of who they are to you and who they are to others, keeping you enriched but impoverishing others. You did not choose this, I know. This isaplea,aplea to listen, listen truly to the cries of the people marching, listen to the movement. It is time forareckoning, I beg you, takeastand. သင့်ဖခင်ကို ချစ်ပါ၊ စစ်တပ်အရာရှိကို မချစ်ပါနဲ့ ယခု စာက စစ်တပ်မိသားစုမှ ကြီးပြင်းလာသော၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုမှ ကြီးပြင်းလာသော၊ အခွင့်ထူးဖြင့် ကြီးပြင်းလာပြီး သင်တို့ ရရှိသည့်အခွင့်ထူးဖြစ်တဲ့ သင့်မိသားစု၏ အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံကြောင့် မျက်နှာသာအပေးခံလိုသော အရာရှိများမှ အဆက်မပြတ်ရရှိသော လက်ဆောင်များ၊ သင့်ရဲ့ ခန်းနားတဲ့ အိမ်ဝင်ပေါက်ရှေ့မှ အစောင့်များ၊ သင့်ကလေးဘဝတစ်လျှောက် ပျော်ပါးစွာ အဆင်းအတက်ပြုလုပ်သော ခန်းနားတဲ့ လှေကားများ စတဲ့ အခွင့်ထူးများနဲ့ ကြီးပြင်းလာပြီး ရရှိသည့် အခွင့်ထူးကို နားမလည်သော သားသမီးများအတွက် အသနားခံစာဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သင်တို့နဲ့ အတူတူပါပဲ။ သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဖခင်၊ မိခင်၊ အဖိုး၊ (သင်နှစ်သက်စွာ အရောင်တင်ပေးသော ကြယ်ပေါင်းများစွာတပ်တဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်သော အခြားမိသားစုဝင်များကို ထည့်) တို့ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတယ်။ သင် မချစ်ပဲ ဘယ်လိုနေနိုင်မှာလဲ။ သင့် မိသားစုဝင်တွေဟာ သင်တို့အတွက် မကောင်းတာ ဘာများလုပ်လို့ပေးဖူးလို့လဲ။ သင့်ကို သင့်မိသားစုဝင်တွေက ချစ်ခင်မှုပေးတယ်၊ အစားအစာမျိုးစုံ (သင်နှစ်သက်တဲ့ သရေစာတွေ၊ အမေရိကန်က တင်သွင်းတဲ့ သရေစာတွေ၊ သင့် ကလေးထိန်းကို တောင်ပန်ပြီး လှီးခြမ်းအခွံခွာခိုင်းတဲ့ ပြည်ပမှ တင်သွင်းတဲ့ သီးနှံတွေ)၊ သင့် ပညာရေး (သင့်အိမ်ကို နေ့စဥ်လာရောက်သော ကျူရှင်ဆရာများ၊ သင့် ကျောင်းမှ အိမ်စာများ ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်မွမ်းမံပေးသူများ၊ သင့် ကျွမ်းကျင်မှု ပညာရပ်များကို မြင့်တင်အောင် ကူညီသူများ) အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်။ သင်ဟာ သူတို့ကို ယုံကြည်တယ်။ သင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သင့်ကို ချီးမြှောက်တဲ့ သင့်ဖခင်ဟာ သူတစ်ပါးကို နှိမ်ချဆက်ဆံတာကို သင်အကယ်၍များ မသိခဲ့တာလား။ ဒါမှမဟုတ် သင်သိရက်နဲ့ လက်မခံတာလား။ သင့်ဖခင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လက်ခံဖို့ သင့်ရဲ့ ပထမခြေလှမ်းဟာ သင့်အထူးအခွင့်အရေးကို အသိအမှတ်မပြုရမှာ မို့လို့လား။ ဒါပေမယ့် သင့်အထူးအခွင့်အရေးကို သင်သိမှ သင်ဟာ ခြေလှမ်းနောက်တစ်လှမ်းလှမ်းနိုင်မှာပါ။ သင့်အထူးအခွင့်အရေးကို အသုံးပြုမှ သင့်လို့ အခွင့်အလမ်းအပြည့် မရှိခဲ့တဲ့၊ ယခုထိ မရှိသေးတဲ့ သူတစ်ပါးဘဝကို မြှင့်တင်နိုင်မှာပါ။ သင့်အခွင့်အရေးကို အသုံးပြုမှ သင်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ ဖိနှိပ်ခံဘဝတွေရောက်အောင် ပြုလုပ်တဲ့ အခြေအနေတွေ မရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ သင့်ရဲ့ အထူးအခွင့်အရေးအတွက် သင်ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ပါတယ်။ သင် ပြန်ပေးဆပ် ရမှာပါ။ သင်ဟာ လူဆိုး တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့မှ မရတာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သမိုင်းရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ရပ်တည်မယ် မရပ်တည်ဘူး ပေါ့။ သင်ဟာ သင့်ဖခင်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတယ်။ စစ်အရာရှိကို မချစ်ဘူး။ သင်ဟာ အထူးအခွင့်အရေးရနိုင်တဲ့ မိသားစုမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အတွက် အလွန်ကံကောင်းပါတယ်။ သင့် မိသားစုကြောင့်လဲ သင့်မှာ သင့်မိသားစုက သင့်အတွက် ဘယ်လိုလူလဲ၊ သူတစ်ပါးအတွက် ဘယ်လိုလူလဲ၊ သင့်ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးပေမယ့် သူတစ်ပါးဘဝကို နှိမ့်ကျအောင် ဆောင်ရွက်နေသူတွေဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ရှိမှာပါ။ သင်ဒီဘဝကို သင်ကိုယ်တိုင် မရွေးချယ်ခဲ့တာ ကျွန်ုပ်တို့ သိပါတယ်။ ဒီစာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အသနားခံစာပါ။ သင့်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ပြောတာကို နားထောင်ကြပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို နားထောင်ကြပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို စာနာကြပါ။ ယခု သင်တို့ ရွေးချယ်ရမယ့် အချိန်တန်ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ သင်တို့ ရပ်တည်ချက်ကို ရွေးလိုက်ပါတော့။
Both in 1989 and in 2015 when the country performed the election rituals sought after by any democratic nation- the world saw Burma’s hunger for democracy when the people voted which resulted toalandslide win, electing Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy party to be the ruling government. Burma has long persisted and pushed through various dictatorship, monarchy and colonial powers and worked her way slowly but surely towards beingademocratic nation. Her journey has been filled with the blood and sweat of her people that have given their lives to free her asanation. Her people have long sought after unity and resilience against dictatorship that come from within lead by the infamous Tatmadaw, the so-called Defence Army that have done nothing but wreck havoc for her. Before daylight approached Burma on the 1st of February this year, what was otherwise supposed to be the start for the newly democratically elected government, the Tatmadaw military abducted the leaders-forcefully enactingacoup d’état. This event was followed by precedent acts (based on the history of 1988) of arrests that involved detaining students, artists, musicians, activists- anyone found favouring democracy. In some places there were news of forceful recruitment by the military and the military enforced their presence by abolishing news channels and media platforms that are non-military. Burma recently gained prominent attention due to the case of the Rohingya genocide put to the International Court of Justice by Gambia. We, the people of Burma, understand concerns raised by the international community when they rightfully question why they should intervene when the government under the National League for Democracy did not intervene in this same case that abuses human rights as greatly is the case happening right now throughout the country. We, the people of Burma, push the international community to review the situation and listen to us when we say that the same perpetrators that committed this heinous act of human rights abuse are the same offenders that our country is suffering acts of violence from this very day- the only difference being that the military was using the NLD government asashield in the former situation. We understand the United Nations has addressed the military in an official statement expressing their concern and the release of our government leaders, State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi and our President U Win Myint. Closed sources have informed us that the military has spread fake news through their news channel, MWD, saying that they have released Daw Aung San Suu Kyi as an act of response to UN’s statements. This information is false- and sources say that they have moved Daw Aung San Suu Kyi from Naypyidaw to Yangon. The military will not stop in creatingafaçade of lies to present itself falsely within the international community. As more protestors are approaching the streets of the cities, we ask the international communities to join us in our fight for our human rights, democracy, andareferendum against the 2008 Constitution. It’s time we take our land back from the military- and this time for good. တို့နိုင်ငံကို ပြန်ပေးပါ။ ၁၉၈၉ နဲ့ ၂၀၁၅ နှစ်နှစ်လုံးမှာ တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လမ်းစဥ်အတိုင်းဖြစ်တယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ရဲ့ National League for Democracy Party (NLD) ကို တစ်စိုက်မတ်မတ် မဲပေးခဲ့ပြီး အစိုးရအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တာကို ကမ္ဘာတစ်ဝှနးလုံးက မြင်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့ များစွာသော အာဏာရှင်စနစ်၊ မင်းရှင်စနစ်၊ ကိုလိုနီစနစ် တွေကို တွန်းလှန်ပြီး ဖြေညင်းစွာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်။ တို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သူမကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေး၊ ချွေး သာမက အသက်ပေါင်းများစွာ စွန်းထင်ခဲ့ရပါပြီ။ သူမရဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ထိန်းချုပ်နေတဲ့၊ နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်ရမယ့်အစား ဖျက်စီးနေတဲ့ တပ်မတော်လို့ အမည်ခံထားတဲ့သူတွေ လက်အောက်ကနေ ညီညွတ်ခြင်းကို ရှာဖွေနေကြပါပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရအသစ် စတင်ရမယ့်နေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော် စစ်တပ်ဟာ မနက် မိုးသောက်ရောင်ခြည်မလင်းမီ အာဏာသိမ်းပြီး တို့ခေါင်းဆောင်ကို ထိန်းသိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်ကွယ်မှာ ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးတဲ့ကျောင်းသားတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ အဆိုတော်တွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ မှန်သမျှကို ၁၉၈၈ သမိုင်း​ကြောင်းနည်းတူ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြန်တယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ စစ်တပ်က ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်ကာ တပ်မတော်အတွင်းဝင်အောင် လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်ရုံ သာမက တပ်မတော် သတင်းချန်နယ်မှ လွဲ၍ ကျန်ရှိတဲ့ သတင်းချန်နယ်တွေ အကုန်လုံးကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ Gambia ဟာ တို့မြန်မာနိုင်ငံကို International Court of Justice မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိးတွေကို မျိုးတုန်းအောင် သတ်ဖြတ်နေတယ်လို့ တင်ပြခဲ့တဲ့ အမှုကြောင့် တို့နိုင်ငံဟာ လူအများရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ပြည်ပလူအများရဲ့ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ NLD ကတောင် လူ့အခွင့်အရေးထိပါးနေတုန်းက ဘာမှမလုပ်ခဲ့တာ ခုနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ ပြည်သူ့ လူ့အခွင့်အရေးထိပါးနေတာကို သူတို့ဘာကြောင့် ကြားဝငိစွက်ဖက်သင့်သလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်တာကို နားလည်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ယခုအခါမှာ ပြည်ပမှ လူအများကို တို့နိုင်ငံရဲ့ အ​ခြေအနေကို သေချာစွာ သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို NLD အစိုးရနောက်ကနေ တိုက်ခိုက်ကျူးလွန်တဲ့ သူတွေက ယနေ့ယခု ကျုပ်တို့နိုင်ငံ့ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံတွေ့ရအောင် လုပ်နေသူတွေပါပဲလို့ ကျုပ်တို့ပြောပြတာကို နားထောင်စေချင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့တွေဟာ United Nations ရဲ့ တရားဝင်စာတန်းမှာ စစ်တပ်ကို တို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပေးတာကို နားလည်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ စစ်တပ်ကနေ UNရဲ့ စာတန်းအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူ့တို့ရဲ့ မြဝတီသတင်းချန်နယ်ကနေ သတင်းအမှားတွေဖြန့်နေတာကို ကျုပ်တို့ရဲ့ သတင်းပေးသူများက တစ်ဆင့်ကြားရပါတယ်။ ကျုပ်တို့ သတင်းပေးသူများက စစ်တပ်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ကို နေပြည်တော်ကနေ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီလို့ ပြောပါတယ်။ စစ်တပ်ဘက်ကနေ ပြည်ပကသူတွေကို လှည့်စားဖို့ မျက်နှာဖုံးပေါင်းစုံတပ်ပြနေတာကို ရပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချိန် ကျုပ်တို့ ပြည်ပမှ လူပေါင်းစုံဟာ တို့နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူ့ အခွင့်အရေး ပြန်ရရန်၊ ဒီမိုကရေစီပြန်ရရန်နဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် မြန်မာပြည်ရဲ့ မြို့နယ် လမ်းမပေါ် ဆန္ဒပြနေသူတွေနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည် မြန်မာပြည်ကို စစ်တပ်လက်ထဲကနေ အပိုင်သိမ်းနိုင်ရမယ်။ ဒီတိုက်ပွဲဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါစေ။
News of the Day - ဒီနေ့တနေ့တာ သတင်း
Feb 4th 2021. Day4of the military coup. ဖေဖော်ဝါရီ (၄)ရက် ၂၀၂၁ ၊ စစ်အာဏာသိမ်းခြင်း လေးရက်နေ့မြောက် As the pounding of pots and pans powered on in protest, Yangon air reverberated with the claps and cheers of the people around5pm, welcoming Myanmar’s newly elected parliament who have scheduled to have their first meeting on Monday amid the coup. အိုးခွက်စလောင်းများ ၊ ဒန်များ တီးခြင်းက ဆန္ဒပြမှုကို အရှိန်ပိုရလာစေသောကြောင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြားက တနင်္လာနေ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ ပထမဆုံး လွှတ်တော်ခေါ်ကြမည့် မြန်မာလွှတ်တော် အသစ်အား ကြိုဆိုသောကြောင့် ညနေ ၅ နာရီတုန်းက လက်ခုပ်သံများနှင့် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ In an attempt to subdue the protests, the military has also released2allegedly “confidential” statements giving out detailed orders to soldiers to report on, arrest, and deploy tear gas and rubber bullets towards the protestors. ဆန္ဒပြမှုကို နှိမ်နင်းဖို့အတွက် စစ်တပ်ဟာ စစ်သားများက ဆန္ဒပြသူများအကြောင်းကို သတင်းတင်ကြဖို့ ၊ သူတို့ကို ဖမ်းကြဖို့ ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ရော်ဘာကျည်ဆန်တွေ သုံးကြဖို့ အတွင်းရေးထုတ်ပြန်ချက် (၂)စောင်ဖြင့် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Soldiers have started arresting several civilians for banging their pots in protest. In Mandalay,a15 year old child was captured by the soldiers for participating in the protest and was releasedafew hours later. စစ်သားများသည် အိုးခွက်များ တီးပြီး ဆန္ဒပြတဲ့ အရပ်သားမြောက်များစွာကို ဖမ်းဆီးဖို့ စတင်ခဲ့ပါပြီ ။ မန္တလေးမှာ ၁၅ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးကို ဆန္ဒပြရာမှာ ပါဝင်လို့ ဆိုကာ စစ်သားများက ဖမ်းဆီးသွားပြီး နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာ လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ U Win Htein,aformer member of the NLD party, has been heard to be arrested. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီက ထိပ်သီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းထိန်ကိုလည်း ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီလို့ ကြားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာ ဘာတွေလဲ ?
သမိုင်းကြောင်း ၁၉၄၇- မြန်မာလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ် ၁၉၄၈ - ဗြိတိသျှများလက်အောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံ လွပ်လပ်ရေး ရခဲ့တယ် ၁၉၅၈ - ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်းဦးဆောင်သော မြန်မာ စစ်တပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဒီမိုကရေစနစ် အစိုးရကို ဖြိုချ ဖို့စဆင်ခဲ့ကြတယ် ၁၉၆၂ - မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဥ်ပါတီ အောက်ရှိ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ထဲသို့ လုံးလုံးကျရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄-ကုလသမဂ္ဂ၏ အတွင်းရေးမှုးဟောင်းဦးသန့်၏ နာရေး နှင့်ပတ်သက်၍အရေးအခင်းဖြစ်ပွါးခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈- စစ်အာဏာရှင်များအာဏာသိမ်းယူခြင်းနှင့် ၈၈၈၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံစတင်ဖြစ်ပွါး ၁၉၉၀-၂၀၀၇-သံဃာတော်များဦးဆောင်သောရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး။ ၂၀၁၀- ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်စတင်လှုပ်ရှားလာပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှလွတ်မြောက် ၂၀၁၅- အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် တပ်မတော်အား ၂၅% နေရာပေးထားရသော (ရွေးကောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်မလိုဘဲ) ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြုလုပ်။ ၂၀၂၀- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) မှ အစိုးရလွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်များ၏ ရွေးကောက်ခံနေရာစုစုပေါင်း ၁၁၁၇ တွင် ၉၂၀ သို့မဟုတ် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၈၂ % အနိုင်ရရှိ။ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ၁။ တရားမျှတစွာယှဉ်ပြိုင်၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်မတက်မီ မနက်စောပိုင်းတွင် စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရ။ ၂။ ပြည်သူများနဲ့ ပြည်သူများအပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်များ မိမိတို့၏လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖော်ပြခွင့်ကို အသုံးပြု၍ ဒီမိုကရေစီအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြသဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရ။ ၃။ မနက် ၃ နာရီအချိန်မှစတင်၍ မြို့တော် နေပြည်တော်နှင့်အနီး တစ်ဝိုက်တွင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုလိုင်းများပြတ်တောက်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းပြတ်တောက်မှုများစတင်ဖြစ်ပွါးခဲ့။ ၄။ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ၊ရေဒီယိုနှင့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုင်းများ ဆက်တိုက်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပွါး။ ၅။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့သွားရောက်သောလမ်းများအားပိတ်ဆို့။ ၆။ ငွေထုတ်စက်(ATM)နှင့် ဘဏ်များအရေးပေါ်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ ၆။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာန(MWD) မှ ဦးမြင့်ဆွေ အားယာယီသမ္မတ အဖြစ် ကြေငြာ။ ၇။ နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွါးနေသော အရေးပေါ်အခြေအနေများကြောင့် တရားဝင် အာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုင်းပြည်၏အခြေအနေအရပ်ရပ်အတွက် တပ်မတော်မှ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခန့် တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း။ အခုဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ၁။ ပြည်သူများက လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခြင်း မလုပ်ပဲ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကန့်ကွက်မှုများပြုလုပ်နေပါတယ်။ ၂။ စစ်တပ်မှ ငွေပေးကာလူများငှားရမ်းပြီး အကြမ်းဖက် ဆန့်ကျင်သူ အသွင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ၃။ အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်သင့်မခံနိုင်သော အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှ ဦးဆောင်ကာ အစိုးရပညာရေးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများက နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါပြီ။ ၄။ အချို့နေရာများ၌ အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုများ Wifi ပြတ်တောက်မှုများနှင့်ကြုံတွေနေသေးပါတယ်။ ၅။စစ်တပ်မှ ထိန်းချုပ်ထားသော ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတစ်မျိုးသာပေးရာမှ အချို့ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုသာပေးပါသေးတယ်။ ၆။ အာဏာရှင်စနစ်ကို တက်ကြွစွာဆန့်ကျင်နေသော သူများ၏ Facebook အကောင့်များ ပေ့ချ် များကို ဖျက်ခြင်း ခိုးယူသုံးခြင်းများရှိနေပါတယ်။ ၇။ လူထူကို ဦးဆောင်နိုင်ခြေရှိသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ စာရေးဆရာများ ၊ ပရိဟိတအသင်းခေါင်းဆောင်များကို လိုက်လံဖမ်းဆီးနေသည့်အပြင် လူငယ်များကို လှုံဆော်ပေးနိုင်ခြေရှိသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကိုလဲ အိမ်တိုင်ရာရောက် ခေါ်ဆောင်နေပါတယ်။ ၈။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် တို့ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချုပ် ထားသည်ပြောသော်လည်း တည်နေရာနှင့် အခြေအနေများကို တိကျစွာ မသိရပါ။ ၉။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်ခံလာအောင် အမိန့်ပေးစည်းရုံးမှုများရှိနေပါတယ် ၁၀။ မငြိမ်သက်သော နိုင်ငံတွင်း အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အခြေခံ လူတန်းစားများ စားဝတ်နေရေးပြသာနာများ စတင်ကြုံနေရပါပြီ။ ၁၁။ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသော ဝန်ကြီးများဟာ ရာထူးမှဖယ်ရှားခြင်းခံရပြီး ၊ စစ်တပ်မှ ဝန်ကြီး အသစ်များ အများဆန္ဒမပါဝင်ပဲ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ ၁၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ တို့ဖြင့် စွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု တရားရေး သတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုက ပြောခဲ့သည်။